Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Haweenka Ogadeniya UHO oo canbaareyn iyo baaq kasoo saaray Xasuuqa Liyuu Polisku kawadaan Koonfurta Shilaabo
Ururka Haweenka Ogadeniya UHO oo canbaareyn iyo baaq kasoo saaray Xasuuqa Liyuu Polisku kawadaan Koonfurta Shilaabo
Posted by ONA Admin	/ June 4, 2015
Date: June 4, 20115
bayaan ururka Haweenka Ogadeniya soo saaray oo ay ku canbaareynayaan falkii waxshinimada lahaa ee Liyuu Polisku xasuuqa ugu geystay shacabka somaliyeed ayaa sidan u dhacay. halkan kala bax warsaxaafadeedka ururka Haweenka
Bayaan UHO soosaaray
Ururka Haweenka Ogaadeenya waxay aad uga xunyihiin dulmiga iyo gumaadka bahalnimada ah ee ay malayshiyada Liyuu Police (Hawaarin) ku hayaan guud ahaan shacabka Soomaalida Ogaadeenya gaar ahaan xasuuqa mudada todobaadka ah ka socda koonfurta degmada Shilaabo ee gobolka Qorahay.
Xasuuqan sabab la’aanta ahi waa mid dhaqan u ah gumaysiga wuxuuna maalin walba ka gaystaa dhamaan dhulka Ogaadeenya. UHO waxay cadaynayaan in uu xasuuqani yahay mid maalinle uga dhaca gudaha dalka Ogaadeenya laguna waxyeelleeyo dad aan is difaaci karin oo masaakiin ah.
Ciidanka Liyuu Police-ku waa ciidan kamid ah Ciidamada gumaysiga Ethiopia, Waxaa tababara, mushaaarka siiya, amarkana ay ka qaataan waa taliska Ethiopia, maahan ciidan soomaliyeed oo u adeega danaha shacabka Soomalida Ogadeniya. Liyuu Polisku waa ciidamada loo adeegsado in Xasuuq u geystaan bulshada Somalida Ogadeniya ee gumeysiga ku hoos jira. Xasuuqan hadda ka socda deegaanada ku teedsan xadka u dhexeeya Ogaadeenya iyo Soomaaliya waa mid uu gumaysigu qorsheeyay waxaana la rabaa in colaad laga dhex huriyo umadda walaalaha ah ee ay dhibaatooyinku daa-shadeen.
Ururka UHO ayaa warqadooda ku soo saaray canbaareyntan
UHO waxay si kulul u cambaaraynayaan falalka arxan darada ah ee lagu gumaadayo shacab Soomaaliyeed oo aan waxaba galabsanin.
UHO waxay aad uga xunyihiin dulmiga joogtada ah ee ay ciidamada gumaysiga iyo adeegayaashoodu ku hayaan guud ahaan shacabka aan waxba galabasanin ee masaakiinta ah.
UHO waxay si aad ah uga xanuunsanayaan una canbaareynayaan gumaadka mudada todobaadka ah ka socda koonfurta degmada Shilaabo laguna laayay dad maxas u badan oo aan hubaysnayn waana arrin aad u murugo iyo naxdin badan oo aan la aqbali karin.
Ururka UHO ayaa warqadooda ku soo saaray baaq ay u jeediyeen ummada soomaliyeed iyo dunida caalamka
UHO waxay cod dheer ugu baaqayaan guud ahaan umada Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxayna ka codsanayaan in si wada jir ah loo fahmo shirqoolada gumaysiga oo ay falalka noocan ahi ka mid yihiin.
UHO waxay umada Soomaaliyeed ugu baaqayaan in hal meel looga soo wada jeedsado falalkan lana wada canbaareeyo oo aan laga soka dhicin hadafka Gumeysiga Ethiopia ee Xasuuqan iyo ujeedooyinka ka dambeeya.
UHU waxat ugu baaqeysaa ummada soomaliyeed inay garab istaagaaan halganka lagu baadi goobayo Xoriyada dhulka iyo dadka Soomalida Ogadeniya.
UHO waxay baaq u dirayaan haay’adaha xuquuqul insaanka ee arrimaha bani-aadaanka u dhaqdhaqaaqa in ay falkan ku baraarugaan dawladaha caalmkuna ay Ethiopia ku cadaadiyaan in la joojiyo xasuuqan bahalnimada ah ee shacabka lala beegsanayo.
Ururuka Haweenka Ogadeniya (UHO)